Sidee loo xirtaa Jiinis? | Ragga Stylish
El Jeans Waa dharka ugu caansan adduunka oo dhan, ka taariikhda jeans Waxay dib u bilaabatay qarnigii 1853-aad XNUMX-dii, xilligii dahabka orodka ee macdanta galbeedka Mareykanka.
Suuqa waqtigaas ayaa falanqeeyay oo go'aansaday in waxa nimankani runtii u baahnaayeen ay ahaayeen surwaal ku filan ku filan inuu iska caabiyo adkaanta shaqadaas ba'an. Marka jiiniskii ugu horreeyay ayaa dhashay. Jeanska maanta wuxuu noqday moodada labada jinsiba. Magaca, Jean, wuxuu ka yimid erayga Genoa, oo arrintu waxay tahay in dharka halkaa laga keenay, shiraac bunni ah oo adag oo adkaysi leh oo surwaalkii ugu horreeyay lagu sameeyay.
Sida aan aragno, waxay ahayd kaliya dharka shaqada iyo moodku wuxuu u rogay dhar caadi ah / aan rasmi ahayn. Laga yaabaa in aad Isku dar jooniska buluugga ah ee buluugga ah ee caadiga ah leh shaararka dharka iyo jaakadaha isboortiga ee midabada fudud.Jiinis khafiif ah ayaa sifiican uga muuqda jaakadaha madow ama blazer.
Waxaa jira midabbo badan oo badan in la isticmaalo marka loo eego kaliya buluugga caadiga ah, caddaan, cagaar, madow tusaale ahaan waa wax rasmi ah, waad ka qayb geli kartaa kulan, ama carwo laakiin ha xirin shaati gacmo furan, oo u aad mid leh gacmo adag . T-shaati ka hooseeya jaakad isboorti waa inuu ahaadaa lycra ama spandex, taas oo inbadan habaynaysa jidhkaaga oo calaamadeynaysa biceps-kaaga. Ama haddii kale xidho nolol maalmeedkaaga, waxaad isku arki kartaa adigu a Bohemian waxay kuxirantahay waxaad isticmaasho.
Shaati dabacsan haddii aad xidhato jiinis cidhiidhi ah iyo haddii aad xidhato jiinis dabacsan, isticmaal shaatiga ugu adag, maxaa yeelay midkoodna waxay u eg tahay in dharkaagu aad u yar yahay ama aad u yar yahay.
El midabka matte ee kabaha ayaa u muuqda mid wanaagsan oo joonis ah, kabaha cagaha adag leh ama qaab kabaha ah, taxaddar haddii ay dhacdo muhiim ah tahay waxaa la doorbidaa inaad ka sii casrisan tahay, sida xirashada kabaha suede ama rootida.
Suunka balaaran, oo isku midabkiisu yahay midabka kabaha, guntin fidsan oo ka culus mida aan guud ahaan ognahay.
Jean waa xulashada ugu dhow inta badan howlaha aan qabanno maalin kasta.
Waxaa laga soo xigtey: ropamodahombre.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Sidee loo xirtaa Jiinis?